I just wanna save you!!Please have mercy on me!!! - Part 24 - Wattpad
I just wanna save you!!Please have mercy on me!!!
ပိုင်ချင်းယွီတစ်ယောက် သူဘယ်တော့မှထပ်မဖတ်ချင်တဲ့ ဝတ္ထုထဲကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တယ် Gong : မင်းက ငါ့အချစ်ဦးနဲ့ ခွဲချင်နေတယ်ပေါ့မင်းကို သတ်ပစ်မယ် Shou : ငါက မင်းအသက်ကို ကယ်ချင်ရုံပါ ဝူး....ဝူး ပိုင္ခ်င္းယြီတစ္ေယာက္ သူဘယ္ေတာ့မွထပ္မဖတ္ခ်င္တဲ့ ဝတၳဳထဲကိုကူးေျပ...
#bl #chinese #romance #transmigration
889 146 13
အမျိုးသမီး၏အသံကြောင့်ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲနေရသောရှောက်ကျစ်ပင်း၏ပိတ်ထားသော မျက်လုံးများပွင့်ကျလာသည်။ပက်လက်အနေထားဖြင့်လှဲနေသောရှောက်ကျစ်ပင်းကထိုင်ချင်သည့်အတွက်ထတော့သည်။ခက်ခက်ခဲခဲထနေရသောသူမသား၏အခြေအနေကိုသတိပြုမိသွားသော အမျိုးသမီးသည်ကုတင်ဘေးအမြန်ပြေးကာကူညီထူမတော့သည်။
"အမေ!!ကျွန်တော်က ကလေးသေးသေးလေးမှမဟုတ်တော့တာ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ!ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအမေသိစရာမလိုပါဘူးဗျာ။အခုကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောချင်လို့အမေအပြင်
ဖော်ရွေမှုပြုသည့်နှယ်ပြောလာသည်။ခေါင်းတွင်သာမက မျက်နှာတွင်လည်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များရှိနေသည်။အထိခိုက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ ခြေထောက်ပင်ဖြစ်သည်။ဘယ်ဘက်ခြေထောက်သည်ကျိုးသွားခဲ့သဖြင့်လောလောဆယ်ကျောက်ပတ်တီးစီးထားသည်။